တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့် တိုက်ခန်း ၁ဝဝဝ ကျော် ဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ ယခုလလယ် စတင်ရောင်းချမည?? - Yangon Media Group
တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့် တိုက်ခန်း ၁ဝဝဝ ကျော် ဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ ယခုလလယ် စတင်ရောင်းချမည??
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်ခြောက် မြို့နယ်ရှိ တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့်တိုက်ခန်းပေါင်း ၁ဝဝဝ ကျော်အတွက် အိမ်ရာဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နေ့မှစတင်ကာ ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လျှောက်လွှာဖောင်များကို အစိုးရဝန်ထမ်း၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းနှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၊ ပြည်သူဟူ၍ အရောင်လိုက် ခွဲခြားထားပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်မှ မတ် ၁၅ ရက်အထိ ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်က သိရသည်။
အဆိုပါ တန်ဖိုးနည်းတိုက်ခန်းများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အ စိုးရအဖွဲ့၏အစီအစဉ်ဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်သည်။ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် မြို့ပြ နှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွင် တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ ရာခိုင်နှုန်း ၂ဝ ပေးသွင်းထားရမှာဖြစ်ပြီး ၁၅နှစ် အရစ်ကျပေးချေစနစ်ဖြစ်ကြောင်း မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ”လျှောက်လွှာတွေကို ခရိုင်တွေကိုလည်း ဖြန့်ထားပြီးပြီ။ ဝန်ထမ်းဆို ဘာအရောင်၊ ပြည်သူဆို ဘာအရောင် ကာလာလေးမျိုးနဲ့ ရောင်းချပေးမယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အိမ်ရာဝယ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာများကိုတစ်စောင်လျှင် ကျပ် တစ်ထောင်နှုန်းဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာနရုံးများတွင် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တန်ဖိုးနည်းတိုက်ခန်းဈေးမှာ ကျပ် ၉၈ သိန်းဝန်းကျင်မှ ကျပ်သိန်း ၁၃ဝ ဝန်းကျင်နှင့် တန်ဖိုးသင့်တိုက်ခန်းများကို ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ မှ ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ၊ ကျပ်သိန်း ၆ဝဝ အထိဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ရောင်းချပေးမည့် တန်ဖိုးနည်း တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများမှာ ဒဂုံမြို့ သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်ရှိ အင်းဝအိမ်ရာ၊ ကောင်းစံသာအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ယုဇနအိမ်ရာ အပိုင်း (၁)နှင့် (၂)၊ က နောင်အိမ်ရာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့ နယ်ရှိ ကြီးပွားရေးအိမ်ရာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ရွှေလင်ပန်းအိမ်ရာ၊ ထီးလှိုင်အိမ်ရာ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ရွှေပေါက်ကံ အိမ်ရာတို့မှတိုက်ခန်းများဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (၁ဝ၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ပုံရုပ်တုများ ကံစမ်
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ရုံးတွင် လိုအပ်နေသည့်ဝန်ထမ်းများကို သင်ကြားရေးနှင့် စီမံခန
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာလုပ်သား ကိုသန်းဇော်ဌေးသေဆုံးမှု သက်ဆိုင်ရာ လဝကဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများကို အရေးယူပေးရေး NGO အဖွဲ့များ ပူးပေါင်း၍ သမ္မတအိမ်ပြာတော်ဝန်းကျင်တွင် ဆန္ဒပြတောင်းဆို
ကိုရီးယားစစ်ပွဲ ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာချက်ဖြန့်၊ နျူကလီးယား ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ဈေးဆစ်၍ မရန